Fiakaran’ny vidin-tsolika : fanjakana tsy mahefa ny FATE
Porofoin’ny vidin-tsolika vaovao amin’izao fotoana afa efa madiva ny tsy ho zakan’ny sarababem-bahoaka intsony ny vokatry ny krizy. Niampy 100 Ariary ny vidin’ny lasantsy raha 3420 Ariary izany teo aloha, ny gazoala kosa dia nitombo 50 Ariary raha 2680 Ariary izany teo aloha. Mazava hoazy fa ahiana ny hiakaran’ny vidim-piainana avy hatrany noho ity fiakaran’ny vidin-tsolika ity. Misy amin’ireo zotra fitanterana isam-paritra ohatra no efa nampiakatra izany sahady nanomboka tamin’ny sabotsy 18 aogositra teo. Ny saram-pitanterana izay mitarika hoazy mankany amin’ny fisondrotan’ny kojakoja ilaina andavanandro izay tena akora fototra ampiasain’ny Malagasy. Raha ny filazan’ny OMH sy ny ministera tomponandraikitra dia tsy nifampiresahan’ny mpanjinjara tamin’izy ireo izao fampiakarana ny vidin-tsolika izao. Izany midika fa efa tsy mahefa intsony ny FATE eo imason’ny mpandraharaha isan-tsokajiny eto amin’ny tany sy ny Firenena.
TIM Antananarivo : manohy ny MAP (+vidéos)
Mpianatra 200 mahery avy amin’ny Sekoly Fanabeazana Fototra 13 ao anatin’ny Boriborintany faha-2 eto Antananarivo renivohitra no nahazo « Kit scolaire » androany. Fitaovana isan-karazany natao hiatrehana ny fanadinam-panjakana voalohany amin’ny fiainana no natokan’ny antoko Tiako I Madagasikara nankaherezana ireto katita kely ireto. Fandaminana isaky ny sekoly no nahafahana nifantina ireto kilonga ireto ka tao ny mpiandraikitra nisafidy ho ireo tena sahirana no notolorana izany fanampiana izany tao kosa ny nanao antsapaka mba tsy hisian’ny olana amin’ny fisafidianana ireo nahazo tombony.
Mbola ho tsara lavitra …
Maro tamin’ireo ankizy no mbola nisalotra ny saron’akanjo na « tablier » natolotry ny Filoha RAVALOMANANA nandritra ny fampiharana ny fanabeazana ho an’ny rehetra. Tsy hadinon’ny maro an’isa izany fotoana nampiharana ny Madagasikara am-perinasa izany satria isan’ny drafitra sosialy natanjaka sy nampiaiky an’izao tontolo izao ny MAP. Nahazo tombony avokoa ny sokajy ara-tsosialy rehetra indrindra fa ny reny sy ny zaza na tamin’ny fahasalamana na tamin’ny fanabeazana. Ao anatin’izao krizy lalovan’ny Firenena izao indrindra no ijoroan’ny TIM amin’ny fanantenana sy ny finoana fa mbola ho tsara lavitra noho izay efa vita hatrizay no hataon’ny Filoha RAVALOMANANA rehefa miverina eo amin’ny fitondrana ny tenany.
« Foyer de Vie » : tsy toe-tsaina Malagasy ny manilika Ray aman-dReny (+vidéo)
Zokiolona 33 no arahi-maso eto amin’ny « foyer de vie » Andrainarivo amin’izao fotoana. Maro ny antony mahatonga azy ireo ato : ao ohatra ny efa osa tanteraka ka ahiliky ny havana satria lazaina fa manahirana. Ao koa ny tratran’ny aretina ka tsy mahatsiaro izay momba azy intsony dia misy manatitra eto amin’ny « foyer de vie ». Ezaka ataon’ireo tomponandraikitra amin’ny toerana toy itony ny mamerina ny zokiolona amin’ny maha-izy azy mba tsy hahatsapa-tena ho vetsatra izy ireo. Raha zohina amin’ny kolo-tsaina tena Malagasy dia tokony andrianina tanteraka ireto zokiolona ireto satria ny fahendren’ny razanatsika dia milaza fa « ny hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara ».
Sary "Foyer de Vie"
Ny maha-mpino kristianina ihany koa dia mandidy ny hanajana azy ireo raha te-ho ela velona ny tsirairay. Maro anefa ny olana mianjady amin’ity ivotoerana ity koa tonga soa avokoa rehefa mety fanampiana na maharitra na mahalana. Ny fikambanana Manda ho an’ny firaisam-pirenena ohatra dia niezaka ny nitondra izay voatsirambin’ny tanany nanomboka tamin’ny volana Martsa 2012. Araka ny fanazavana dia akora ilaina isan’andro sy sakafo misy otrik’aina no vatsy entin’ny fikambanana mankeny Andrainarivo isam-bolana. Nampiavaka ny androany kosa ny fanomezan’ny malala-tanana iray fahitalavitra ho an’ny « foyer de vie » ho fialam-boly sy fanaraham-baovao. Mbola maro moa ny tetikasa iarahan’ny ivotoerana sy ny fikambanana indrindra fa eo amin’ny fiezahana hanandratra ny hasin’izany loharanao nipoirana izany.
Tolon’ny mpiasam-panjakana : mihenjana amin’ny ramatahora ny FATE (+vidéos)
F ampahafantarana ny fitoriana fiandry ho an’ny filohan’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy sy ny filohan’ny sendikan’ny mpitsabo mpiasam-panjakana no votoatin’ny fampiantsoana azy mirahalahy ireto teny amin’ny « Brigade criminelle » Anosy androany. Raha ny fanazavan’ny mpisolovava dia nisy olona roa nitory azy ireo amina resaka fanalam-baraka, fandrahonana ho faty ary fanelezana vaovao tsy marina. Mikasika indrindra ny fidiran’ny andian’olona tao amin’ny HJRA ny Alatsinainy teo moa izao fitoriana izao.
Mamo miantso polisy
Nambaran’i Valérien Rakotonandrasana androany fa « ireo olona nizara vola hanakorontanana ny hetsiky ny dokotera sy ny paramed ny alatsinainy teo ihany no nitory ». Fihetsika izay nahatalanjo azy mirahalahy ihany satria na dia tsy nisy aza ny fitononana ny anaran’ireto olona ireto nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny sendika roa tonta dia nihetsika avy hatrany ireto olona ireto. Namafisin’i Valérien anefa fa nisy koa naman’izy ireo notafihina ny harivan’io fanakorontanana io ary ny sarin’ireo mpanakorontana izay nalaina ny maraina no nokarohin’ireo mpanafika. Notsoriny fa mbola hametraka fitoriana mikasika io ihany koa ny paramed fa tsy hitsahatra velively.
« Dokotera izy ireo ary izaho no filohan’ny sendikan’ny mpitsabo » hoy kosa ny Dr. Ndatason « ka tsy misy antony tokony hamonoaka azy ireo ». Nambarany moa fa ny tolona sendikaly toa izao dia iadiana ny hanatsarana ny asa ary voakasik’izany ireto olona nametraka fitoriana ireto raha ny SMEDFM manokana no resahina. Tsy notanana tao amin’ny borigadin’ny heloka bevava ary zy roalahy fa dia afaka namonjy ny namany sy ny fianakaviany avy hatrany taorian’ny fampahafantarana ny anton’ny fampiantsoana.
Famoretana ny « réquisition »
Ankoatra ireo mpitarika sendikaly izay efa mpiara-dia amin’ny paramed sy ny dokotera dia tazana teny amin’ny tokotanin’ny BC ihany koa ny filohan’ny sendikan’ny « administrateurs civils » androany maraina. Raha toa ka toa nihalangalana tamin’ny tolona atrehin’ny mpisam-panjakana amin’izao fotoana ity lehiben’ny « grand corps de l’Etat » ity dia tonga nanotrona ireto mpitarika sendikaly mirahalahy nampanantsoin’ny BC ireto izy androany. Notsoriny fa raha ny « réquisition » manokana dia endrika famoretana ho an’ny mpiasam-panjakana izany hanerena azy ireo hiverina hiasa. Nambarany ary fa raha fisamborana sy fampiasan-kery no asetrin’y mpitondra ny fitakian’ny sendika dia tsy hahita vahaolana amin’ny fihenjanan’ny tady a anatin’ny roa amin’ny roa tonga ny manam-pahefana.
CEG Ambatomanga Arivonimamo : tsy misy dian-tanan'ny FATE (+vidéo)
Vola mitentina 50 tapitrisa Ariary no lany nananganana ireo efitra enina ho an’ny sekoly fampianarana ambaratonga faharoa eto amin’ny kaomina Ambatomanga distrikan’Arivonimamo. Ny fikambanana « Trevor Madagascar » izay najoron’ny zanaka am-pielezana avy amin’ny kaomina ihany no niantsoroka ny ampahany betsaka tamin’ny fandaniana. Tolo-tanana avy amin’ny mpiray tanindrazana kosa no nahazahoana ny ambiny raha tokony ny fitondrana no miantsoroka izany. Ity farany izay tsy nahazahoan’ny ben’ny tanàna fahafaham-po hatramin’ny ora farany nanombohana ny asa.
Sary CEG Ambatomanga
Hivaha manomboka eto izany ny olan’ny ankizy eto amin’ny kaomina Ambatomanga amin’ny fiatrehana ny fianarana aorian’ny fanadinana CEPE ary efa nambaran’ny ben’ny tanàna ihany koa fa vinavina ny hametrahana « lycée agricole » itambaran’ireo kaomina maromaro mifanolo-bodirindrina mba hamporisihina ny tanora hilofo amin’ny fambolena fampandrosoana maharitra fa tsy ivelomana fotsiny ihany.
Teo anolon’ireo tomponandraikitry ny fampianarana maro ao anatin’ny Faritra Itasy no nanakianan’ny solombavam-bahoaka vofidy tao Arivonimamo ny fomba fiasan’ny FATE mikasika ny sehatra fanabezana. Toa atao zanak’ikalahafa manko ny kilonga any Ambanivolo fa mivangongo any an-drenivohitra ny fihetsiketsehana. Vokany dia mitan-takolaka izay mpianatra tsy manam-bintana toy ny eto Ambatomanga satria raha tsy misy ny fanampiana avy amin’ny tsara sitrapo dia tsy zarizary ny fianarana. « Tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha RAVALOMANANA » hoy Rodin Rakotoamanjato « dia mailaka ery hamonjy sekoly ny zanaka Malagasy. Ankehitriny anefa miverina manampy ny Ray aman-dReny eny an-tsaha ny ankamaroany noho ny krizy ». Raha nahazo « cantine scolaire » avokoa ohatra ny sekolim-panjakana tamin’ny fotoan’androny dia voetry mamboly ny mpianatra eto amin’ny CEG Ambatomanga ka ny fikambanana « Tregor Madagascar » ihany no mividy ny vokatra ary dia avadika ho sakafon’ny ankizy ao am-pianarana avy hantrany ny vola miditra.
SEMPAMA vs FATE : izy mivady no miady … ny ankizy no hanao taona fotsy !
Raikitra izany fa tsy handefitra intsony ny SEMPAMA amin’izay toeram-pianarana na mpampianatra mbola minia manao amboletra hampanao fanadinana. Amin’izy ireo dia fampivakiana ny zanaka Malagasy ny mbola fanerana ny hanaovana fanadinana eto Antananarivo nefa ny any amin’ny faritra efa efa-bolana izao no tsy nanohy ny fampianarana intsony. Tonga maro eto an-drenivohitra arak’izany ireo mpikatroka SEMPAMA avy any amin’ny Faritra 21 hafa hanenjana izany fitakiana fanehoana firaisan-kiana izany.
Melohin’ireo mpampianatra mpanabe avy any amin’ny Faritra ny toe-tsain’ny mpampianatra sasantsasany eto Antananarivo. Toa mbola manome vahana ny mpitondra izy ireo ary minia hampanao fanadinana na dia fantatra fa tsy azo atao aza izany amin’izao aretina mikiky ny tontolon’ny fanabeazana izao. Nomarihin’ireo avy any amin’ny Faritra 21 ary fa rehefa tsy afaka ny hahatsapatena hampitsahatra ny fanadinana ny mpampianatra sasany dia hoavy hanakatona ny toeram-pianarana ny mpikatroka SEMPAMA mba ho fampanajana ny zon’ny ankizy any amin’ny Faritra izay tsy afaka miatrika izany fanadinana izany.
Araka ny vaovao nampitain’ireto mpikatroka ireto dia ny distrikan’Antananarivo renivohitra sy Atsimondrano no tena tsy miray hina amin’ny mpanabe manerana ny Nosy. Ao amin’ireto distrika ireto izany no asa lehibe hatrehin’ny SEMPAMA manomboka rahampitso mba ho tena hisy ny fiaraha-mientana eo amin’ny mpampianatra.
Manamafy sofina ny FATE …
Mety tsy hisy na, farafahatsarany, hihemotra ny fanadinana aram-panjakana rehetra raha ny fizotran’ny toe-draharaha amin’ny fanabezana eto amintsika. Tao anatin’ny efa-bolana nitakian’ny SEMPAMA ny zony dia tsy nisy nohenoin’ireo milaza fa mpitondra eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny fitarainan’izy ireo. Raisin’izy ireo ho toy ny finiavana tsy hifampitsinjo izany fihetsikin’ny FATE izany koa dia izao hiha-mafana izao ny tolona hatrehina. Hatreto aloha, ankoatra ny mpanabe, dia hizaka izany tsy fahaiza-mitantana sy fanaovana be marenina ataon’ny FATE izany ny zanaka Malagasy rehetra ary dia ahiana ho taona fotsy ny 2011-2012.